သတ္တမနေ့ အစီအစဉ် (၂၅ - ၅ - ၂၀၁၈)
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမြသောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအား မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ် (GENDER STUDIES CENTER) မှ ဆရာ/ဆရာမ (၅)ဦးနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တရုတ်နိုင်ငံ CPPCC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့အား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် (CPPCC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Wang Zhengwei ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး အဆောက်အအုံသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိ
အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များအား UNFPA ၏ ဒုတိယအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် UNFPA အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး တို့အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တရုတ်နိုင်ငံ CPPCC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့အား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် (CPPCC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Wang Zhengwei ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမြသောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအား မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ် (GENDER STUDIES CENTER) မှ ဆရာ/ဆရာမ (၅)ဦးနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ လာရောက်တွေ့ဆုံသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၃ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၉.၃.၂၀၁၈)
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၂ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၃.၃.၂၀၁၈)
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၂.၃.၂၀၁၈)
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၀ ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (၂၁.၃.၂၀၁၈)